Qish ku jirey khudbo uu xalay jeediyey AAW, qodobbo ku socda Xasan Sh & halka laga ergaystey magaca CBB?!! | Hadalsame Media
Home Maqaallada Qish ku jirey khudbo uu xalay jeediyey AAW, qodobbo ku socda Xasan...
Qish ku jirey khudbo uu xalay jeediyey AAW, qodobbo ku socda Xasan Sh & halka laga ergaystey magaca CBB?!!
(Hadalsame) 17 Maajo 2022 – Faaqidaadda hadal-jeedintii AAW ee xalay iyo waydiimaha ku jira ee war-celinta u baahan.
Si loo afjigo ama loo banneysto aflagaadada dadka Shacabka ah ee la dhacsanaa siyaasadda MD xilka banneenaya Mohamed Abdullahi Farmaajo waxaa loo bixiyey CBB (Cayayaanka Baraha Bulshada), ama si guud ayaa loogu tilmaamay in ay yihiin WAX MA GARATO.
Ereyga CBB oo ah mid laga soo turjumay luuqadda Carabiga (ذباب الكتروني ) ayaa soo shaac baxay bilowgii dagaalkii Khaliijka (Gulf Crisis) ee bartamihii hillaaddii 2017 qarxay.
Dagaalkaas oo lahaa weji kala duwan, aagag si xun la’isugu fara-saaray waxaa ku jiray aaladaha Baraha Bulshada, halkaas oo loo aaneeyo in markii horeba uu ka dillaacay.
Dhinacyadii is hayey ayaa qaarkood lagu eedeeyey in ay adeegsadeen kootooyin aan jirin, sidaas waxaa ku baxay ereyga caanka noqday ee (ذباب الكتروني).
Sidaas daraadeed, AAW oo isna mucaarad ku ahaa Xukuumaddii Soomaaliya ee xilligaas ayaa dagaal adag kala kulmin kooxihii Baraha Bulshada, taas, waxa ay keentay in uu erey bixintii af Carabiga ahaa u rogo Soomaali, durbadiiba caan ayey noqotay! Maanta qof walba oo nidaamkii dhacay qaabka ay doonto ha ahaatee taageersanaa waa CBB! Waa la ‘Generalize’ gareeyey.
Intaasi waa gogol dhigga aan ugu socdo dulucda faaqidaada hadal jeedintii Abdirahman Abdishakur Warsame.
Qodobo dhawr ayaa ayaan horudhac ugu sii sheegay dhigaal aan saacad kahor soo dhigay halkan.
Horseed Siyaasadeed (Politigal Elites) ama (النخب السياسية), ayuu xalay ka dhawaajiyey AAW oo la hadlayey kooxdiisii ol’olaha iyo taageereyaashiisa.
Ujeedka uu u socday siyaasigu waxa ay daarneed doorashadii uu dhawaangalay balse natiijada ka keeni waayey.
Odayga waxa uu sheegay in Wadajir Party oo ah xisbigiisa in dadka caadiga ah (Grassroots)ka ay ku xooganaayeen, haddii go’aanka doorashada ay iyagu jaam goynteeda leeyihiinna uu guul ka keeni lahaa.
Waxa uu si duur xul ah u sheegay in natiijadii soo baxday ee uu libinta ku helay HSM ay ku timi go’aan ay gaareen horseedka siyaasadeed ama waxa uu ugu yeeray ‘النخب السياسية) ama ‘Political Elites’.
Wuu sii faahiyey oo waxa uu sheegay in kuwaasi ay jiheeyaan DANO gaar ah oo siyaasadeed! Halka shacabka guud na ay danta guud wax ku qiimeeyaan.
Haddii AAW shacabkii isaga taageersanaa ay yihiin kuwo danta guud jecel, kuwii kalena CBB yihiin, goorma ay kala darajo noqdeen?
Warsame, waxa uu xalay si qalbi ah meesha uga saaray turjumaadda beenta ah ee ay Soomaalidu saarto “Indheer-garadka siyaasadeed’ kuwaas oo ay dadka qaar ku tilmaamaan kuwo waaqiciin ah, wax fahma, dhabta iyo dhallanteedka kala garan OG!
Marka ay Soomaalida joogto, Indheer-garad ama ‘Elites’ waa yaa leh xirfadda lagu gaaro dano siyaasadeed ama yaa wax DHiCI kara iyada oo laga dheef qaadanayo awoodda xafiiseed ama dowladeed.
Shacabka ama (Grassroots), AAW ayaa noo sheegay waxa ay u taagan yihiin.
MADAXWEYNE HORE MUCAARAD MA NOQDO
AAW oo ku dhawaad shan sano garab taagnaa laba MD hore oo mucaarad ah ayaa xalay sheegay in madaxweyne hore mucaarad noqon karin.
Siyaasigu wuu sababeeyey hadalkiisa oo waxa uu sheegay odayaashii hore Xaaladdii dalka ee adkeyd ayaa sababtay! AAW so ma ahayn in uu sheego 8 bilood xukuumad jirtay xaaladda adag ee ay dal galin kartay? HSM sideed bilood kaddib ayuu soo dagay Muqdisho, bilaabay ol’ole iyo mucaaradad.
Mise waxaan dhihi karnaa hadalkaas waxa uu ku socday Farmaajo.
DOWLADDA WAX BAAN KU LEENAHAY
AAW waxa uu carrabaabay in dowladda cusub ee dhalaneysa uu wax ku leeyahay! Tolow ma 15kii cod baa ee wareegay? Ma shantii sano ee mucaaradnimadaa? Tolow waa maxay waxa ay AAW iyo taageereyaashiisa ku darsadeen MD HSM?
Mise AAW waxa uu xaqiijiyey in uu ku daalay mucaaradnimada oo uu maanta rabo ka qeybgalka nidaamka cusub?
TALO KU SOCOTA MD DOORAN HSM
Madaxweyne fursad dahabi ah ayaad heshay, hore uma dhicin shakhsi hore hoggaanka sare ee dalka mar qabtay oo mar kale la aaminay.
Laba midood ayay ku jirtaa
1 – In aad waqtiga yar ee aad haysato hawsha dowlad dhiska meesha kooxdii hore uga tageen aad ka sii ambaqaaddo oo aad hiigsiyada (Benchmarks) waa weyn gadho sida; dhammeystirka dastuurka, amni sugan, doorasho qof iyo cod ah, maqaamka Benadir, iyo federaaleyn dhammeystiran.
2 – In wixii lagugu eedayn jiray afartii sano ee muddo xilleedkaagii hore aadan wax ka baran, sida koox awoodda isu gaar yeesha, musuq maasuq lagu eedeeyo iyo waqti ku dhammaada natiijo la’aan.
Intaas waxaad ku gaari kartaa adiga oo oday qaran noqda, soo dhaweeya raggii kula soo halgamay sida AAW iyo waliba kooxdii hore intooda la jaan qaadi karta siyaasadaada. Ujeedka, dhis dowlad qaran oo ka madax bannaan koox iyo qolo kuu buraanburta. QIIL MA HELI DOONTID MARKAAS.
Previous articleXOG: War kasoo kordhay lacagtii ay Xukuumaddii hore ka xayirtay Imaaraadka ee taalley Baanka Dhexe
Next articleERGO IDMAN: Axmed Madoobe oo dalab CULUS hor dhigay Xasan Sh & jawaabta la siiyey